“Liverpool waxay kulan walba u ciyaartay sida inay tahay fursaddoodii ugu dambeysay” – Pep Guardiola oo ka fal celiyay ku guuleysiga Reds ee Premier League – Gool FM
“Liverpool waxay kulan walba u ciyaartay sida inay tahay fursaddoodii ugu dambeysay” – Pep Guardiola oo ka fal celiyay ku guuleysiga Reds ee Premier League
(Manchester) 26 Juun 2020. Tababaraha Manchestern City ee Pep Guardiola ayaa qirtay inay ku guuldarreysteen inay xilli ciyaareedkan kula loolammaan horyaalka Premier League kooxda Liverpool.
Reds ayaa hanatay horyaalka Ingiriiska muddo soddon sano ah kaddib, waxaana xalay u dabaal dagtay horyaalnimada England markii ay Chelsea 2-1 ku garaacday kooxda Man City oo loollan aan tabar badneyn kula jirtay kooxda Macallin Jurgen Klopp.
Citizens tababarahooda Guardiola ayaa caddeeyay inay Liverpool ku hammineysay hanashada horyaalka in ka badan kooxdiisa, waxaana uu sheegay inay kooxdiisa soo bandhigtay xamaasad ka yar tan dhiggooda.
“Waxaa laga yaabaa inaanan la immaan xamaasadda ay iyagu la yimaadeen. Liverpool waxay kulan walba u ciyaareysay si la mid ah inay tahay fursaddoodii ugu dambeysay” ayuu yiri Guardiola.
“Liverpool waxay sameysay joogteyn cajiib ah.
“Waxaan luminnay dhibco bilawgii xilli ciyaareedka, balse iyagu ma aysan qasaarin wax dhibco ah” ayuu hadalkiisa ku sii daray macallinka reer Spain.
Guardiola ayaa sidoo kale ku gooddiyay inay fasal ciyaareedka dambe la imaan doonaan qaab ciyaareedkii joogtada ahaa ee ay Liverpool sameysay fasalkan si ay u soo ceshtaan ku guuleysiga Premier League.